I-loft enhle, amathala abheke i-Cevennes - I-Airbnb
I-loft enhle, amathala abheke i-Cevennes
Saint-Roman-de-Codières, Cévennes, i-France
I-i-loft ephelele ibungazwe ngu-Hélène
U-Hélène Ungumbungazi ovelele
Phakathi koLwandle lwe-Mediterranean nentaba ephakeme, kokubili ngaphakathi kwemisebe engu-60km, ukuqasha kutholakala ku-600m ngaphezu kolwandle, endaweni enhle enokuthula futhi elondolozwe kakhulu i-Cevennes hamlet. Ilungele abantu abashadile, imindeni enezingane, izihambi ezihamba zodwa futhi ingahlalisa ababungazi abavakashile.
Indawo yokugcina iqukethe i-loft engu-100ylvania ngaphansi kwe-vault enhle kakhulu endala ebuyiselwe ngokuphelele kanye namathala angu-3 e-esalier enendawo engu-100 m2 futhi.
Indlela ephakathi koLwandle lwe-Mediterranean nentaba (i-Mont Aigoual) kokubili ngaphakathi kwemisebe engu-60km, ukuqasha kutholakala ku-600m ngaphezu kolwandle, endaweni enhle enokuthula futhi elondolozwe kakhulu i-Cevennes hamlet. Ilungele abantu abashadile, imindeni enezingane, izihambi ezihamba zodwa futhi ingahlalisa ababungazi abavakashile.
I-loft isendaweni yaphansi yesakhiwo samatshe esidala kusukela ngekhulu le-17, savuselelwa ngokuphelele.
I-hamlet yase-Montredon ithule futhi inokuthula. Iqukethe izindlu eziningi zokuhlala.
Ukuqasha nakho kuyisiqalo esihle sokuzijabulisa kwangaphandle okufana nokugibela amahhashi noma ukugibela izimbongolo, ukugwedla ngesikebhe, ukugwedla ngesikebhe, ukuhamba ngezinyawo kanye ne-vias ferratas, ukuhamba ngezinyawo, ukubhukuda emfuleni wendawo, ukuhamba ngebhayisikili lezemidlalo, ukugwedla... Izimakethe eziningi ezizungeze ubuhle obuhlaba umxhwele zikuvumela ukuba ujabulele imikhiqizo yendawo. Umnakekeli weselula naye uvakashela i-hamlet kabili ngeviki, ngoLwesithathu nangoMgqibelo. Ngenkathi lesi sifunda saziswa ngokukhethekile ngokuzola nobumnandi bempilo, uzothola nesipho esicebile nesiningi samasiko afana nomkhosi womculo odumile we-Vigan, umkhosi wemidlalo yaseshashalazini wase-Gange "Les Transes Cévenoles"...
Ukuqasha nakho kuyisiqalo esihle sokuzijabulisa kwangaphandle okufana nokugibela amahhashi noma ukugibela izimbongolo, ukugwedla ngesikebhe, ukugwedla ngesikebhe, ukuhamba ngezinya…
UHélène Ungumbungazi ovelele
Hlola ezinye izinketho ezise- Saint-Roman-de-Codières namaphethelo